Ike anyị - Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co. Ltd.
Emi odude ke a na-eduga mbukota obodo Qiaotou, Dongguan, a n'ichepụta isi obodo nke China, anyị ụlọ ọrụ na-ọkachamara na ibu nkwakọ, na ijikọta ịkpọ, imewe, rụpụta, ọrụ na ahịa. Anyị wuru ntọala ụlọ ọrụ anyị nke oge a ma nweta akwụkwọ ikikere nke ISO9001, ISO14001, FSC, CARB, wdg.
Tọrọ ntọala na 2005, e kesara ụlọ ọrụ anyị na ụlọ na mba ofesi, gụnyere Shenzhen, Dongguan, Guangzhou, Suzhou, Wuhan, Chongqing, Shandong, Malaysia, Singapore, Philippines, Vietnam, wdg Na mkpuchi nke 60,000 square mita, kwa afọ mmepụta uru nke Xinhong Champion Qiaotou Industrial Park karịrị CNY 500 nde.
Anyị nwere ngwaahịa mbụ na ngwongwo: ngwugwu buru ibu, nkwakọ ngwaahịa seiko, pallet dị fechaa, mpempe akwụkwọ, wdg. Anyị nwere atụmatụ ngwugwu ngwugwu zuru oke: mmemme mmepe nke ihe ọhụrụ, atụmatụ mgbake ụwa nke mpempe akwụkwọ na ihe ndị metụtara akụ. nakwa dị ka ahụkarị ikpe zigara si n'ichepụta mbukota ngwaahịa upgrading ulo oru yinye maka ahịa 'ngwaahịa nkwakọ; Anyị na-echekwa ego maka ndị ahịa ma chekwaa akụ ndị sitere n'okike.
Companylọ ọrụ anyị nwere ndị otu nwere ọrụ nwere agụmakwụkwọ toro eto ma tokwa nnabata. Ruo ugbu a, anyị ahụla ngwangwa mmepe nke ụlọ ọrụ mbukota, gbakọtara ọtụtụ ahụmịhe nke ọrụ ụlọ ọrụ wee guzobe usoro njikwa sayensị.
N'iji iguzosi ike n'ezi ihe, nhazi na izu ezu, CPS na-enye usoro nkwakọ ngwaahịa gbasara ihe na nkwakọ ngwaahịa maka ndị ahịa site na nkwakọ ngwaahịa, imewe, usoro, imepụta, njem, ụlọ nkwakọba ihe, JIT, nnyefe, ndozi, imegharị, wdg
Ihe ndị anyị ji mee ihe kachasị mma maka gburugburu ebe obibi. Osisi na recyclable ihe bia na mbu. Anyị ga-eji akụ ndị sitere n'okike wepụta ụzọ dị iche iche e siri agbanwe agbanwe.
Iji nye ihe akaebe siri ike nke ngwaahịa ndị na-egbo mkpa ndị ahịa maka ha, ụlọ ọrụ anyị wuru ụlọ nyocha dị elu iji nwalee ogo na arụmọrụ nke ngwaahịa na Dongguan.
E guzobere usoro nke ire na ọrụ nke ọma; ITlọ nkwakọba ihe JIT ewulitela maka ndị ahịa; E guzobela usoro njikwa ERP, na-enye data na ịkekọrịta ozi maka otu mmepe azụmahịa na ngalaba ọrụ ndị ahịa.